Crypto-anarchism: Barnaamijka bilaashka ah iyo dhaqaalaha farsamada, mustaqbalka? | Laga soo bilaabo Linux
Bini'aadamnimada tan iyo markii loo sameeyay sidan oo kale, waxay ka soo baxday meel ka baxsan isbeddelka tikniyoolajiyadda, sidaas darteed, horumarka tiknoolajiyadeed ee kala duwan ayaa saameyn ku yeeshay horumarka bulshada aadanaha. Muujinta sida akhriska, qorista, xisaabta, beeraha, warbaahinta iyo hada tikniyoolajiyadda warfaafinta iyo isgaarsiinta ayaa tusaale u ah sida horumarka tikniyoolajiyaddu u beddelayo habka aan ula macaamilno ganacsiga, farshaxanka iyo sayniska, Nidaamyada Dawladda iyo tiirarka awoodda.
Dhanka kale, falsafadda ku jirta oo ay baahisay Horumarinta Barnaamijka Bilaashka ah iyo tibaaxaha la midka ah sida Source Source, ama saamaynta ay ku yeelan karto horumarka socda sida Cryptocurrencies oo ku hoos jirta dalladda Teknolojiyada 'Blockchain Technology' (Blockchain) waxay si xagjir ah u beddeleysaa habka ay dadka adduunka oo dhami isugu yimaadaan oo wax ula falgalaan, badiyaa ka baxsan xakamaynta dawladaha ama awoodaha dhaqaale.
1.1 Software bilaash ah oo casri ah
2 Maaliyadda Teknolojiyada iyo Cryptocurrencies
2.1 Xannibaadda iyo Teknolojiyada Xisaabaadka Loo Qaybiyey (DLT)
2.2 Cryptocurrencies iyo Macdanta Dijital ah
2.3 Laakiin muxuu Cryptocurrencies si guul leh u gaadhay?
3.2 Suuragal ma tahay Dowlad Crypto-Anarchist?
Waqtiga xaadirka ah, Warshadaha Horumarinta Software-ka iyo badanaa Software-ka Bilaashka ah ayaa la aasaasay shaki la’aan iyada oo ah mid ka mid ah tibaaxaha ugu muhiimsan ee farsamo-dhaqameed ee heerka muwaaddinka guud ahaan adduunka, iyadoo xoog lasaarayo qodobbada qaaska ah ee meeraha.
Qiyaasida nolol maalmeedka muwaadin kasta adigoon la falgaleynin softiweerka qaar ficil ahaan waa wax aan macquul aheyn maanta, ama ugu yaraan howl cabsi badan leh in lala kulmo. Ma jiro qalab, qalab ama madal shaqeyn kara iyada oo aan la helin softiweerka ku habboon, maaddaama qalabkan la'aanteed aan la xiriiri karin, dhaqaajin karin ama shaqeyn karin, sida aan maanta sameyno. Software waa aaladda aasaasiga ah ee u shaqeynta bulshadeena.
Software bilaash ah oo casri ah
Heerka Software-ka Bilaashka ah hadalkani wuu ka xoog badan yahay, maaddaama ay ka dhigan tahay fursad ama baahi jirta oo loo qabo in lagu sii joogo si suubban casriga in marar badan ay noqotaa mid xaddidan sababo la xiriira kharashyada, xaddidaadaha iyo faa'iido darrada isticmaalka softiweerka gaarka loo leeyahay, gaar ahaan aagagga meeraha oo dadweynuhu aysan ku lahayn heerar dakhli ama hanti ku filan oo ay ku taageeraan.
Ama meesha Dawladaha ama Qaybaha Gaarka loo leeyahay ay isku dayaan inay qaabeeyaan ama xakameeyaan dadka iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo gaar ah oo keenaya, helaya iyo / ama ganacsi ku sameynaya xogtayada ama oggolaansho la'aan, ku soo xadgudubista asturnaantayada ama faragelinta fikradaheenna iyo xaqiiqda dhabta ah.
Bulshadeena, bini aadamnimada maanta, muwaadinka caadiga ah, waa in ay taas marwalba hubiyaan nidaamka horumarinta softiweerku wuxuu ilaaliyaa shuruudda in xaddiga ugu badan ee softiweer laga sameeyo meel ka baxsan ganacsiga iyo awoodda ganacsi, taas oo ah, in loo horumariyo shaqsi ahaan iyo naftooda.
Kee baa kara la qabsadaan tirada ugu badan ee dadka kartida leh, xaalada waa la ilaalinayaa taas U adeegso softiweerka si xor ah ujeeddo kasta, iyo in la hubiyo inay awooddo in la barto si loo fahmo sida ay u shaqeyso, si loo horumariyo loona wadaago qof walba.
Xilliganna waa halka Software-ka Bilaashku uu si fiican ugu habboon yahay afarta (4) xorriyadeeda (mabaadi'da) shuruudahan muhiimka u ah bulshada casriga ah. Xusuusnow in afarta (4) xorriyadood ay kala yihiin:
Maaliyadda Teknolojiyada iyo Cryptocurrencies
Oo ay weheliso Horumarinta Barnaamijka Bilaashka ah, Tobankan sano ee la soo dhaafay adduunku wuxuu noqday mid caalami ah, iyo Bulshooyinku waxay noqdeen kuwo aad iyo aad isugu xidhan iyada oo loo marayo aaladaha teknolojiyada iyo adduunka dhijitaalka ah si jibbaar ah, horumarsan oo isdaba joog ah, iyo hadda iyadoo la adeegsanayo Teknolojiyada Blockchain in nolosha la siiyo Cryptocurrency-ka ugu horeeya ee loo yaqaan «Bitcoin» waxay carqaladeysay oo bedeshay, waxayna badashay qeybaha kala duwan ee siyaasada, bulshada iyo dhaqaalaha aduunka.
Xannibaadda iyo Teknolojiyada Xisaabaadka Loo Qaybiyey (DLT)
Teknolojiyada 'Blockchain' iyo Teknolojiyada Xisaabaadka Loo Qaybiyay (DLT), guud ahaan, waxay ku soo rogaysaa kacdoon dhab ah nidaamkii hore ee maaliyadeed, dhaqaale iyo xitaa siyaasadeed iyo bulsho; qaadashada ugu sarreysa ee xawaaraha, daahfurnaanta, amniga iyo xisaabinta nidaamyada kaladuwan ee duugoobay ee hadda maareeya macluumaadka dijitaalka ah ee dhinacyada sida caafimaadka, waxbarashada, amniga, ganacsiga, dukumintiyada, ama doorashada taliyayaasha, iyo kuwo kale.
Tusaale ahaan, marka la eego nidaamyada codbixinta, aaladda DLT waxay gebi ahaanba beddeli kartaa astaamaha dhaqanka dimoqraadiyadda; xoojinta astaamaha codbixin aamin ah, mid caalami ah, qasab la'aan iyo aqbalida suurtagalnimada dimuqraadiyad aan xuduud lahayn
Cryptocurrencies iyo Macdanta Dijital ah
Iyo ku saabsan ganacsiga iyo adeegsiga Cryptocurrencies, oo ay sii kordhayaan dad aad u tiro badan maalin kasta, in haddii ay gaaraan heer ay si ballaaran u korsanayaan, ay su'aal gelin doonto nidaamka bangiyada hadda jira., taas oo had iyo jeer siisay aragti ah qaadashada qaab xadgudub ah oo lagula macaamilo oo loo isticmaalo lacagta dadka, iyada oo aan la tirinin wax isdabamarin badan (khayaano, musalafaad) ay badanaa la kulmaan.
Iyadoo aan lagu xisaabtamin saamaynta xorriyadda iyo madaxbannaanida dhaqaale iyo / ama dhaqaale ee Macdanta Dijital ahi ay ku keeni karto Muwaadinka, kala soocida waax ballaaran iyo ku-tiirsanaanta iyo korjoogteynta qaybaha ganacsiga gaarka loo leeyahay ama kuwa dowliga ah.
Laakiin muxuu Cryptocurrencies si guul leh u gaadhay?
Guusha Cryptocurrencies iyo tikniyoolajiyadaha kale ee la xiriira waxay ka yimaadeen kalsoonida ay muwaadiniinta la falgalaya iyaga dhex dhigteen. Saameyntan ama nidaamka kalsoonida loo sameeyay shaki la'aan waxay timaadaa maxaa yeelay cryptocurrency si loogu guuleysto waa inay noqotaa noqo softiweer bilaash ah.
Waxaan ula jeedaa, lambarka isha ee cryptocurrencies badanaa waa furan yahay waana bilaash, sidaas awgeedna waxay damaanad qaadeysaa suurtagalnimada in hantidhawr joogto ah lagu sameeyo software-ka sidaa darteedna la hubiyo in ficillada khiyaanada ah aan lala fulin iyaga ama barnaamijyada taageeradooda (Blockchain / Blockchain), oo aan ka badnayn buug xisaabeed baahsan oo macaamilku si guud ama badh ahaan loogu duubay - jamhuuriyadda iyo halka dheelitirku aanu ku xirnayn isticmaalayaasha, laakiin cinwaanada ay iyagu koontaroolaan.
Qaybta kale ee muhiimka ah ee nidaamkani waa buug-yarahan oo ah xannibaadda, ayaa lagu keydiyaa kumbiyuutar kasta oo shaqeynaya guntin dhameystiran, taas oo ficil ahaan aan macquul aheyn in macaamil ganacsi la been abuurto, kaas oo u safraya si qarsoodi ah ama loo xareeyay heerarka sare ee amniga.
Iyo sidee Crypto-Anarchism ugu habboon tahay Software-ka Bilaashka ah iyo Cryptocurrencies?
Waqtigan xaadirka ah Crypto-anarchism waxaa lagu qeexi karaa celcelis ahaan, maaddaama ay tahay fikrad dhowaan si caddaalad ah u dhacday oo si joogto ah ula qabsiga isbeddelada adduunka, sida mid mqaab dowladeed oo casri ah taasi ma dafiri karto Hanti-wadaagga hadda jira, laakiin waxay u aqoonsan tahay inay tahay shar shar u ah aadanaha, taas oo ay lagama maarmaan tahay in laga gudbo si loo gaaro jiritaankeeda.
Crypto-anarchism wuxuu qaabilaa / soo dhoweeyaa qof kasta oo hantiwadaag ah, hantiwadaag ah, hanti-goosad ah, dimuqraadi ah, midig, bartamaha, bidix, ama ku dhowaad isbeddel kasta oo ka dhex jira, illaa iyo inta taageeradaada oo dhan laga helayo habka aad u aragto adduunka, waxaa loogu talagalay cadeeyo / dayactiro Dawlad / Dal ay Dawladeeda / Hay'addiisu si qoto dheer u furantahay, u fidsan tahay, u baahsan tahay, loo xannibo, isla markaana loo madaxbaneeyo.
Crypto-anarchism wuxuu kobciyaa muwaadiniinta xorta ah, madaxbannaan iyo wax soo saar dhaqaale iyada oo loo marayo kor u qaadista iyo adeegsiga tikniyoolajiyadaha dadweynaha iyo kuwa gaarka ah, qaranka iyo kuwa caalamiga ah, oo ku saleysan Teknoolojiyada Macluumaadka iyo Isgaarsiinta iyo Silsiladaha Xannibaadda ah (Blockchain) si loo damaanad qaado kalsoonida, amniga, kalsoonida, xaqiijinta, xawaaraha iyo faa'iidooyinka kale ee muwaadinka .
Cryptanarchism waxay dhistaa sharciyo cadaalad ah oo dheellitiran laakiin aad u xoog badan, inta la siinayo saraakiisha (kharash) siyaasiyiinta aadka u daciifka ah, taasi waa, iyada oo aan lahayn awood siyaasadeed, bulsho iyo mid dhaqaale oo weyn iyo mudnaan, si looga fogaado musuqmaasuq ama agglomeration of power.
Marka la soo koobo, Crypto-Anarchism wuxuu dhiirrigeliyaa, u xagliyaa kuna tiirsan yahay isticmaalka Software-ka Bilaashka ah iyo FinTech si uu ula kulmo, dhammaan rajooyinka casriga ah ee Muwaadinka casriga ah, taasi waa, waxay ujeedkeedu yahay in la dhiso qaab cusub oo dib ugu noqda qaabkii hore ee duugoobay iyada oo loo marayo tiknoolajiyada si loo ixtiraamo oo si hufan oo hufan loogu damaanad qaado xuquuqda muwaadiniinta, loo damaanad qaado amnigooda iyo asturnaantooda, iyo muujinta dhabta ah ee go'aanadooda ama ficilladooda on awood ku dhisan.
Suuragal ma tahay Dowlad Crypto-Anarchist?
Sidoo kale, Dowlad Cryptoanarchist ah iyada oo ku saleysan adeegsiga degdegga ah ee teknoolojiyaddan oo baaxaddoodu aysan ku xaddidnayn soohdinta, waxay si dhakhso leh ugu guuleysan kartaa naxariista muwaadiniinta aqlabiyadda leh ee leh rabitaan weyn labadaba tijaabinta tiknoolajiyada cusub iyo ka-qaybgalka moodooyinka cusub ee dimoqraadiyadda, qayb weyn oo ka mid ah xaaladaha siyaasadeed-siyaasadeed iyo dhaqaale ee aan sugnayn ee ummadaha qaarkood ay isku helaan.
Gebogebadii, Crypto-anarchism waxay leedahay meel aad u ballaaran oo lagu hirgelin karo, dalal badan oo ay bulshooyinku ka joogaan oo keliya ka dib raadinta nidaamyo dimoqraadiyadeed oo qas badan oo la qaybiyey., laakiin sidoo kale waxay bixisaa qaab nololeed ku dheehan tahay fikradda adduunka iyo baahinta. Mustaqbal xudduudda xuduudaha aysan jiri karin oo dhulka oo dhan uu yahay dhulkeenna si siman, halkaasoo dijitaalka iyo cryptocurrencies ay yihiin amarka maalinta.
Haddii aad rabto inaad akhrido maqaalo kale oo la mid ah oo ku saabsan Faa'iidooyinka Software-ka Bilaashka ah ee Muwaadinnimada ee Blog-keena, guji xiriirka soo socda: Dimuqraadiyadda.
Ugu dambeyntiina, haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato Crypto-anarchism, waxaa jira suugaan badan oo ku saabsan internetka, laakiin waxaad ku bilaabi kartaa xiriirkan: Xorriyadda Crypto. Iyo maaddaama Cryptanarchism ay ku saleysan tahay Anarchism, waxaan kaaga tagay fiidiyowgan si aad u jebiso wax kasta oo tab ah ama wareer ku saabsan fikradan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Crypto-Anarchism: Barnaamijka bilaashka ah iyo dhaqaalaha farsamada, mustaqbalka?
Jeermiska 21 dijo
Waxay umuuqataa utopia oo ah sanado fudud oo xaqiiqda jirta.
Taasi waa sababta dhamaadka Magaca daabacaadda ay u leedahay: Mustaqbalka?
Mid kastaa wuxuu yeelan doonaa ujeeddo u gaar ah oo ku saabsan arrintan ...
Waa mowduuc aad u xiiso badan oo murugsan oo aan u maleynayo inuu aad ugu fiican yahay gelitaanka baloogga.
Waxay iga yara yaqyaqsatay inaan isku daro doodo leh erayga dowlad la’aan iyo dimuqraadiyad. Waxaan u maleynayaa inay tani la xiriirto xaqiiqda ah in fowdada ay tahay nooc ka mid ah dowladda (ama aan ahayn dowladda); meelaha qaarkood, halkii laga isticmaali lahaa 'crypto-anarchism', waxaa fiicnaan lahayd in la isticmaalo 'crypto-punk', oo aad isugu dhow laakiin aan diiradda saareyn qaabka dowladda lafteeda, laakiin ku wajahan dhaqanka ku xeeran cryptography.
Waa hagaag, si kastaba ha noqotee maqaal wanaagsan.
Faallooyin aad u fiican iyo tabaruc, gaar ahaan markii la sheegayo dhaqdhaqaaqa 'cryptopunk', oo si kama 'ah aan uga tagay daabacaddan.
Xaqiiqdiina, waxay muhiim u yihiin dhaqdhaqaaqan oo dhan ee isku dayaya inuu beddelo adduunka jihada ee danta qofka iyo muwaaddinka, dalbashada iyo damaanad qaadka arrimaha gaarka ah, amniga iyo magac la'aanta.
Waxaan dhihi lahaa isku biirista Dhaqdhaqaaqa Cryptopunk iyo Dhaqdhaqaaqa Anarchist ayaa asal ahaan ka soo jeeda Crypto-anarchism, oo hadda hela dardar iyo xoog sababtoo ah isticmaalka Cryptocurrencies.
Waxaan kaaga tagayaa xiriiriyahan haddii aad rabto inaad wax yar ka ogaato Dhaqdhaqaaqa 'Criptopunk Movement'
Ku kaydi faylashaada daruuraha adoo isticmaalaya Cryptomator on Linux
Taageerada TrueCrypt iyo veracrypt ee Tails 3.9 waxay imaan doontaa Sebtember 5